सेफ्टी रेटिङमा टाटा र महिन्द्रा अगाडि, अन्य ब्रान्डको अवस्था के ? | Automotive News Nepal
सेफ्टी रेटिङमा टाटा र महिन्द्रा अगाडि, अन्य ब्रान्डको अवस्था के ? २४ कार्तिक, २०७७
केही समय अघिसम्म सवारी धनीले सबैभन्दा बढी जोड गाडीको आरामदायी फिचर्स र इन्धन किफायतीपनमा दिने गर्थे । तर अहिले उक्त धारणामा फेरबदल आएको छ । हाल आरामदायी फिचर्स र इन्धन किफायतीका साथै सेफ्टी फिचर्समा समेत ध्यान दिन थालिएको छ ।
सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा भईपरि आउनेसक्ने सम्भावित दुर्घटनाका बखत आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरुलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन यस्ता फिचर्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा उनीहरुले यसमा ध्यान बढाउन थालेका हुन् ।
हाल भारतीय बजारमा प्रायः सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारीसाधन उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसैगरी भारतीय भूमिमै विकास भएका टाटा, महिन्द्रा र मारुतीजस्ता ब्रान्डका सवारीसाधन समेत छन् । भारतमा यी तीन ब्रान्डका सवारीसाधन सर्बाधिक बिक्री हुने मध्येमा पर्छन् । यी ब्रान्डलाई पछिल्लो समय कोरियाली ब्रान्ड हुन्डाई र कियाले कडा टक्कर दिइरहेको छ । यद्यपि सेफ्टी फिचर्सको मामिलामा भने टाटा र महिन्द्रा निकै अगाडि रहेको देखिन्छ । ग्लोबल एनक्यापले गरेको सेफ्टी रेटिङमा टाटा र महिन्द्राले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेबाट यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।
सन् २०१४ यता ग्लोबल एनक्यापले भारतमा उत्पादन हुने बिभिन्न गाडीहरुको सेफ्टी टेष्ट गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो टेष्टमा टाटा र महिन्द्राले विश्व प्रख्यात भनिएका टोयोटा, रेनो, फक्सवागन, सुजुकी, जीप, हुन्डाई, किया, होन्डा र निसान ब्रान्डलाई पछि पार्दै सुरक्षाका मामिलामा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।
हाल १० उत्कृष्ट सुरक्षित कारको सूचीलाई हेर्दा टाटा र महिन्द्रा ब्रान्डकै बर्चस्व रहेको छ । यो लिस्टमा महिन्द्रा एक्युभी ३०० ले एडल्टमा ५ र चाइल्ड सेफ्टीमा ४ स्टार रेटिङ सहित पहिलो स्थान हासिल गरेको छ भने टाटा अल्ट्रोजले एडल्टमा ५ र चाइल्डमा ३ स्टार रेटिङ सहित पिछा गरिरहेको छ । त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा रहेको टाटा नेक्सनको नयाँ भर्सनले पनि एडल्टमा ५ र चाइल्डमा ३ स्टार रेटिङ हात पारेको छ । टाटा नेक्सनकै पुरानो भर्सन एडल्टमा ४ र चाइल्डमा ३ स्टार रेटिङ हात पार्दै चौथो स्थानमा रहन सफल भएको छ ।
पाँचौ स्थानमा रहेको टाटा टिगोर र टियागोले समेत ४ स्टार रेटिङ हात पारेको छ । सूचीको छैठौं स्थानमा भने फक्सवागन पोलो पर्न सफल भएको छ । पोलोले एडल्टमा ४ र चाइल्डमा ३ स्टार रेटिङ हात पारेको हो । त्यसैगरी सातौ, आठौ, नवौ र दशौ स्थानमा क्रमशः महिन्द्रा मराजो, टोयोटा इटियस, मारुती सुजुकी भिटारा ब्रेजा र टाटा जेस्ट पर्न सफल भएका छन् । यी सबै गाडीले एडल्टमा ४ र चाइल्डमा २ स्टार रेटिङ हात पारेका हुन् ।
ग्लोबल एनक्यापले सन् २०१४ यता हालसम्म टेष्ट गरेका सवारीसाधनलाई आधार मानेर यो लिष्ट सार्बजनिक गरेको हो । यी सबै गाडीको नेपाली बजारमा समेत कारोबार हुँदै आइरहेको छ ।